အခ်စ္ေရး Archives - Khitalin Media
လူတိုင်းဟာ အချစ်ဦးနဲ့ လက်တွဲခွင့်မရတတ်ကြပါဘူး။ အချစ်ဦးတင်မဟုတ်ပဲ။ တစ်ခါတစ်လေ အချစ်ဆုံးဆိုသူတွေနဲ့ လည်းကွဲကွာတတ် ကြပါတယ်။ ဒီလိုကွဲကွာတဲ့အခိုက်အတန့်မှာ ခံစားရတဲ့ဝေဒနာမျိုးဟာ ပြောမပြတတ်လောက်အောင်နာကျင်ရပါတယ်။ အချို့သူတွေကတော့ နှစ်အနည်းငယ်အကြာမှာ အနည်ကျသွားပေမယ့် အချို့သူတွေကတော့နှစ်တွေအများကြီးကြာသွား တာတောင်အနည်မထိုင်ပဲရှိနေတတ်ပါတယ်။ အသဲကွဲခြင်းက ရေရှည်ဖြစ်နေပြီး မိမိကိုယ်ကိုလွင့်ချင်ရာလွင့်ပါစေဆိုပြီး မျှောထား တဲ့လှေ တစ်စင်းလိုပြုမူနေရင်တော့ သင့်ဘဝကို အမြန်ဆုံးပြုပြင်သင့်ပါပြီ။ အောက်ပါအချက်တွေက သင့်ရဲ့အချစ်ရဆုံးကိုချက်ချင်းကြီးမေ့အောင်တော့ မကူညီနိုင်ပေမယ့် အချိန်အမြန်ဆုံးမေ့အောင် ကြိုး စားတဲ့နေရာမှာတော့ ကူညီပေးနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ (၁) ပထမဆုံးသင်သတိရဖို့က အချိန်တွေအများကြီးရှိသေး တယ်ဆိုတာပါပဲ။ သင့်ရဲ့အချစ်ဆုံးကို ဘယ်လောက်ကြာရင် မေ့နိုင်အောင်ကြိုး စားမယ်ဆိုပြီး ပုံသေကြီးချမထားပါနဲ့။ ဒီအချက်ကသူ့ ကိုပိုပြီး သတိ ရစေပါတယ်။ အချိန်ကတဖြည်းဖြည်း ကုစားသွားမယ်ဆိုပေမယ့် အဲ့ဒိအချိန် ဆိုတာကြီးကို ခဏခဏခေါင်း ထဲမရောက်ပါစေနဲ့။ သင်ကအချိန်ကာလာအကန့်အသတ်ပေးထားရင် အချိန်ပြည့်လို့ မမေ့ နိုင်သေး ရင် … Read more
နှလုံးသား နူးညံကြတဲ့ အေသွေးပိုင်ရှင် မိန်းကလေးတွေရဲ့ စိတ်နေစိတ်ထား
နှလုံးသား နူးညံကြတဲ့ အေသွေးပိုင်ရှင် မိန်းကလေးတွေရဲ့ စိတ်နေစိတ်ထား သူမဟာ တည်ငြိမ်တယ် ၊ အေးချမ်းတယ် ၊ လောကကြီးကို သဘာဝအတိုင်း တွေးမြင်တတ်တယ် ။ အချစ် ဆိုတာကို ပေးဆပ်ခြင်းလို့ သတ်မှတ်ထားပီး ကိုယ့် ဆီမှာ မနေလိုသူကို ဖက်တွယ် မနေတတ်ဘူး ။ ငြိမ်းငြိမ်းချမ်းချမ်း နေရတာကို သဘောကျနှစ်သက်တယ် ။ ဘာကိုပဲလုပ်လုပ် စနစ်တကျ လုပ်တတ်ပီး စေတနာ ပါပါ လုပ်တတ်ကြတယ် ။ ဘဝမှာ ဘယ်အရာကိုမှ အလွယ်တကူ မ လိုချင်ဘူး ။ အပေးနဲ့အယူ သဘောတရားကို နားလည် သဘောပေါက်တယ် ။ သူမရဲ့ ချစ်တဲ့သူကိုလည်း သူမလို အေးချမ်းပျော်ရွှင် စေချင်တယ် ။ ယောင်္ကျား တစ်ယောက်ရှိမှ ဘဝကို … Read more
လက်ထပ်ခွင့်တောင်းတဲ့အခါ ဘာလို့ ဒူးတစ်ဖက် ထောက်ကြတာလဲ?
January 21, 2022 January 20, 2022 by Khitalin Media
လက်ထပ်ခွင့်တောင်းတဲ့အခါ ဘာလို့ ဒူးတစ်ဖက် ထောက်ကြတာလဲ? ချစ်သူ ကောင်လေးက ဒူးတစ်ဖက် ထောက်ပြီး ချစ်သူကောင်မလေးကို ခရမ်းရင့်ရောင် လက်စွပ် ဗူးလေးထဲမှာ တ လက်လက်တောက်ပ နေတဲ့ စိန်လက်စွပ် ကိုပြပြီးတော့လက်ထပ်ဖို့ခွင့်တောင်းတာပါ။“ငါ့ကိုလက်ထပ်နိုင်မလား” ဆိုတဲ့ မေးခွန်း မမေးမီ ဒူးအရင် ထောက်ရတဲ့ အကြောင်းရင်းက ဘာများဖြစ်မလဲ။ ဒီလိုရိုမန့်တစ် ဆန်ဆန် အပြုအမူမျိုးကဘယ်တုန်းက အစပြုခဲ့လဲဆိုတာတော့ ဘယ်သူမှ မသိကြဘူးနော်။ဒါပေမယ့် ဒီ အပြုအမူက ကတိ ပေးတယ်ဆိုတဲ့ သဘောမျိုးသက်ရောက်တယ်လို့ ထုတ်ဖော်တဲ့ သီအိုရီတွေတော့ရှိပါတယ်နော်။ အလယ်ခေတ် သူရဲကောင်းတွေရဲ့ ကြင်နာသိမ်မွေ့ရဲရင်တဲ့ ပုံစံမျိုး မတိမ်ကောသွားတဲ့အပြင်နောက်ပိုင်းခေတ်သစ် ရောက်လာချိန်မှာ လည်း အလယ်ခေတ်အေဒီ ၁၁၀၀ ၊ ၁၄၀၀ တုန်းကပိုးပန်းတဲ့ နည်းလမ်းတွေ သုံးကြတာပါ။ဒူးထောက်တယ်ဆိုတာက လည်း ရိုမန်တစ် ဆန်တဲ့ အခမ်းအနားတွေမှာ … Read more
MESSAGES လေးတွေရဲ့တန်ဖိုးချစ်သူတွေကြားမှာဖြစ်စေ ” လင်မယားတွေကြားမှာဖြစ်စေကိုယ်ဘယ်ရောက်နေတယ်.. ဘာလုပ်နေတယ်ဆိုတဲ့..massage လေးတစ်ကြောင်းက တစ်ဦးအပေါ်တစ်ဦးဘယ်လောက် အလေးနက်ထားတယ်ဆိုတာကို သိသာစေပါတယ် ။ တကယ်တော့လူတွေပြောနေကြတဲ့ ” ချစ်တယ် ” ဆိုတဲ့စကားဟာ လူတစ်ဦးနဲ့တစ်ဦးပိုပြီးနီးစပ်စေတာကလွဲပြီးရင်ဘတ်ထဲ ကိုတော့ မထိရောက်စေပါဘူး ။ ချစ်တယ် ဆိုတဲ့စကားကို ကြိုက်သလောက်ပြောပါစေသူငါ့ အေပၚတကယ္ခ်စ္ပါလား ” သူ ငါ့ကိုတကယ္ခ်စ္တာပါ ”ဆိုတဲ့ အသိ ကလွဲပြီး ကိုယ့်အပေါ် ဂရုတစိုက်နဲ့ အလေးအနက်ထားတဲ့ အပြုမူလိုတော့ ရင်ဘတ်ထဲမှာ မလေးနက်တာတော့အမှန်ပါ ။ ဂရုစိုက်ခြင်း ‘ ကြင်နာယုယခြင်း ‘ နွေးထွေးတဲ့မေတ္တာတရားစသဖြင့် အကြောင်းတရားတွေဟာ ” အချစ် ” ဆိုတဲ့ ပေါင်းကူးတံတားက စတင်ခဲ့တာမှန်ပါတယ် ။ ဒါပေမဲ့ တချို့တွေက အချစ်ဆိုတဲ့ ပေါင်းကူးတံတာကိုတော့ကျော်လွှားခဲ့ပါရဲ့ တဖက်ကမ်းလည်းရောက်ရော ရှေ့ဆက်မ … Read more
“သင့်ကို တန်ဖိုးမထားတဲ့ချစ်သူကို နောင်တရသွားအောင်လုပ်နိုင်မယ့် နည်းလမ်း(၅)မျိုး”
“သင့်ကို တန်ဖိုးမထားတဲ့ချစ်သူကို နောင်တရသွားအောင်လုပ်နိုင်မယ့် နည်းလမ်း(၅)မျိုး” ကိုယ့်ဘက်က ချစ်နိုင်သလောက် ချစ်ပေးခဲ့ပေမယ့် ကိုယ်ချစ်မှန်းသိလို့ အနိုင်ယူပြီး ကိုယ့်အချစ်တွေကိုတန်ဖိုးမထားဘဲ ပစ် ချ ခဲ့တဲ့ သူမျိုးနဲ့ကြုံ ရတဲ့ အခါ ဒီအတွက် ပြိုလဲခံစားမနေပါနဲ့။ ကိုယ့်အချစ်တွေကို တန်ဖိုးမထား ခဲ့တဲ့ သူအတွက် ကိုယ့်ကိုယ်ကို ထိခိုက် မခံဘဲ သူတို့တွေနောင်တရသွားအောင် ဒီလို နည်း လေးတွေနဲ့ တုံ့ပြန် လိုက်ပါ။ (၁) ဂရုမစိုက္ပါနဲ့ ကိုယ်ချစ်တာတွေကို သူတန်ဖိုး မထားမှန်း သိပြီ ဆိုတာနဲ့ သူ့ကို တွယ်ကပ်နေ တာထက် ဂရုမစိုက်တာက ပိုကောင်းပါ တယ်။ သူ့ရဲ့အပြုအမူတွေ၊ အချိုးတွေနဲ့ ပတ်သက်လို့ သင့်ဘက်က လုံးဝ ဂရုမစိုက် ဘူးဆိုတာ သူသိအောင် ပြသပါ။ ဒါမှ သင့်ရဲ့တန်ဖိုးကို … Read more
ကောင်လေးဘက်က သင့်ကိုအတည်တွဲနေမှန်း သိသာနေတဲ့အချက်များ…
ကောင်လေးဘက်က သင့်ကိုအတည်တွဲနေမှန်း သိသာနေတဲ့အချက်များ… အချစ်ရေး တစ်ခုမှာ အကြောက်ရဆုံးကတော့ ကိုယ်က စိတ်ရင်းအမှန်နဲ့ ပုံအပ်ပြီးချစ်ရသလောက် ကိုယ့်ကိုအပျော်တွဲခံရ တာပါပဲ။ ဒါဟာ လူတော်တော်များများလည်း ကြုံရလေ့ရှိတဲ့ ပြဿနာတစ်ခုဖြစ်သလို ခံစားရတာလည်း အရမ်းကိုဆိုးရွားပါတယ်။ ဒါကြောင့်မို့လို့ ကိုယ့်ကိုအပျော်တွဲတာလား၊ အတည်တွဲတာလားဆိုတာ ခွဲခြားသိမြင်တတ်ဖို့ လိုပါတယ်။ ခုဖော်ပြပေးမယ့်အချက်လေးတွေကတော့ သင့်ကိုအတည်တွဲနေတဲ့ ယောကျ်ားတစ်ယောက်ရဲ့ လက္ခဏာတွေဖြစ်ပါတယ်။ သင့်ချစ်သူနဲ့ ကိုက်ညီနေရင်တော့ သင်ကံကောင်းပါတယ်။ (၁) သင့်အနားမှာနေရင် ရယ်မောပျော်ရွှင်နေမယ် သင့်ကိုအတည်တွဲတဲ့ ယောကျ်ားတစ်ယောက်ဟာ သင့်အနားမှာနေတဲ့အချိန်တွေမှာ ရယ်မောပျော်ရွှင်နေတတ်တဲ့သူပါ။ ဟန်ဆောင်ပြီး ပျော်တဲ့ပုံဖမ်းနေတာမျိုးနဲ့တော့ အရမ်းကိုကွာပါတယ်။ သူ့ကိုသင်ကြည့်လိုက်တာနဲ့၊ သင့်အနားသူ ရောက်လာတာနဲ့ အမြဲတမ်းပျော်ရွှင်ပြီး ကြည်နူးနေတတ်တဲ့သူမျိုးပါ။ (၂) သူ့ရဲ့အပြုအမူမှာပေါ်လွင်နေတယ် ယောကျ်ားလေးတွေဟာ စကားအပိုတွေ၊ တီတီတာတာတွေ သိပ်မပြောတတ်ကြပါဘူး။ ဒါပေမယ့် သူတို့ရဲ့ ခံစားချက်ကို အပြုအမူနဲ့ ဘယ်လိုဖော်ပြရမလဲ … Read more
ရည်းစား ဟောင်းက မက်ဆေ့ ပို့လာပြီဆိုရင်
January 17, 2022 by Khitalin Media
ကိုယ်က သူ့ကိုလွမ်းနေတုန်း မက်ဆေ့ ဝင်လာပြီဆိုရင် စာပြန်ရမလား… မသိသလိုနေရမလား။ ရည်းစား ဟောင်း ဆိုတာလည်း မတော်တော့တဲ့ အဝတ်တစ်ထည်လိုပဲလေ။ တစ်ချိန်တုန်းကတော့ အမြတ်တနိုးဝတ်ခဲ့တာပေါ့။ ကိုယ်နဲ့မတော်တော့တဲ့အခါ ဘယ်လောက် ကြိုက်ကြိုက် ဝတ်လို့မရ တော့ဘူး။ ပြတ်သွားပြီးတဲ့နောက်မှာ ကိုယ်က သူ့ကို မမေ့နိုင်သေးပါဘူးဆိုမှ သူက မက်ဆေ့ ပို့လာတဲ့အခါ ဘာလိုတုံ့ပြန်ကြမလဲ? ဝေခွဲရခက်နေရင် ဒါတွေကိုဖတ်ပြီးမှ တုံ့ပြန်ပါ။ ၁။ ပုံမှန်အတိုင်း တချို့ ရည်းစား ဟောင်းတွေက ချစ်လို့တော့မဖြစ်နိုင်ပေမဲ့ မိတ်ဆွေ အဖြစ်နဲ့ သိမ်းထားသင့်တဲ့လူမျိုးပါ။ သူ့ဘက်ကလည်း ရိုးသားတယ်ဆို ပုံမှန်အတိုင်း မိတ်ဆွေ လို ပြန်ပြောပေါ့။ သူ့ အချစ်သစ် အကြောင်းတွေပြောလာရင် ကိုယ်က သဝန်တိုတဲ့အရိပ်အယောင်တွေလည်း မပြမိပါစေနဲ့။ ၂။ မပြောချင်ဘူးလား သူနဲ့ဘယ်လိုမှ မပတ်သက်ချင်တော့ဘူးဆိုလည်း ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းသာပြောပြလိုက်ပါ။ … Read more
အချစ်ရေးကံကောင်းတယ်ဆိုတာ ဒီလိုချစ်သူမျိုးကို ပိုင်ဆိုင်ထားခြင်းပါ…
Unicode အချစ်ရေးကံကောင်းတယ်ဆိုတာ ဒီလိုချစ်သူမျိုးကို ပိုင်ဆိုင်ထားခြင်းပါ… ချစ်သူကစိတ်ချမ်းသာအောင်ထားရင်၊ အရာအားလုံးကို ဂရုစိုက်ရင်၊ မျက်နှာတစ်ချက်အညိုမခံဘဲ လိုလေသေးမရှိဖြည့်ဆည်းပေးတယ်ဆိုရင် အဲ့ဒီလိုချစ်သူမျိုးကို ရထားတဲ့မိန်းကလေးကို အချစ်ရေးကံကောင်းတယ်လို့ ပြောကြပါတယ်။ တကယ်တော့ အချစ်ရေးကံကောင်းတယ်ဆိုတာ ဒီလိုလူမျိုးကိုရထားတာကို ခေါ်တာ (၁) ကိုယ့်အပေါ်ပွင့်လင်းတဲ့သူ အချစ်ရေးမှာ ဖုံးကွယ်ထားတာတွေမရှိဘဲ ကိုယ့်ချစ်သူအပေါ်ပွင့်လင်းရိုးသားတဲ့သူမျိုးပါ။ ကိုယ့်အကောင်းတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ အမြဲတမ်းပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောပြနိုင်တဲ့ချစ်သူမျိုးပေါ့။ (၂) ကတိမဖျက်တဲ့သူ ကတိတစ်ခုကိုလွယ်လွယ်မပေးတတ်တဲ့သူ၊ ပေးပြီးသားကတိကိုလည်း လွယ်လွယ်နဲ့မဖျက်တတ်တဲ့သူမျိုး၊ ကိုယ့်ချစ်သူအပေါ်မှာ အမြဲတမ်းကတိတည်တဲ့သူမျိုးပါ။ (၃) အပြောနဲ့မဟုတ် အလုပ်နဲ့သက်သေပြတဲ့သူ ချစ်တာကို အပြောနဲ့သက်သေမပြဘဲ၊ အလုပ်နဲ့သက်သေပြတတ်တဲ့သူမျိုး၊ အသေးစိတ်ဂရုစိုက်တတ်တဲ့သူ၊ ကိုယ့်ချစ်သူစိတ်ဆင်းရဲအောင်မလုပ်တဲ့သူမျိုးပေါ့။ (၄) အမြဲတမ်းကာကွယ်ပေးတတ်တဲ့သူ ကိုယ်ချစ်ရတဲ့သူ ခက်ခဲနေတဲ့အချိန်မှာ စွန့်ခွာမသွားတဲ့သူ၊ ဘယ်လိုအခြေအနေမှာပဲဖြစ်ဖြစ် ကိုယ့်ချစ်သူကို ကာကွယ်ပေးတတ်သူ၊ ချစ်သူကိုအထိအခိုက်မခံဘဲ ကာကွယ်တတ်တဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ (၅) ချစ်သူကိုဦးစားပေးတတ်တဲ့သူ ဘယ်အရာနဲ့ပဲနှိုင်းယှဉ်ပြီးရွေးချယ်ရပါစေ ကိုယ့်ချစ်သူကိုပဲ အမြဲဦးစားပေးရွေးချယ်တတ်တဲ့သူ၊ အရာအားလုံးထက် … Read more
Unicode အပျော်ရွှင်ဆုံးလို့ သင်မြင်တဲ့စုံတွဲကိုရွေးပါ….သင့်အချစ်ရေးကိုမှန်အောင်ပြောပြမယ်… ခုပြထားတဲ့ ပုံလေးသုံးပုံမှာ အပျော်ရွှင်ဆုံးဖြစ်မယ်လို့ သင်ထင်တဲ့ စုံတွဲတစ်တွဲပုံကို ရွေးချယ်လိုက်ပါ။ ပြီးရင်တော့ သင်ရွေးချယ်လိုက်တဲ့ ပုံလေးကနေတစ်ဆင့် သင့်ရဲ့အချစ်ရေးကိုပြောပြပေးပါမယ်။ အဖြေတွေကိုတော့ အောက်မှာကြည့်လိုက်ပါနော်။ ပုံ (၁) ကို ရွေးခဲ့ရရင် ဒီပုံလေးကိုရွေးချယ်လိုက်တဲ့ သင့်အချစ်ရေးကတော့ အေးဆေးတည်ငြိမ်တဲ့ အချစ်မျိုးပါ။ သင့်ချစ်သူနဲ့ဓာတ်ပုံတွေ၊ သင့်အချစ်ရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကို Social Media တွေပေါ်မှာ လူသိရှင်ကြားချပြနေစရာမလိုဘူး ဆိုတဲ့အတွေးမျိုးရှိသူပါ။ သင်ဟာ Social Media ပေါ်မှာ လူအများရဲ့အာရုံစိုက်မှုကို ရဖို့ထက် လက်တွေ့ဘဝမှာ လက်တွေ့ကျကျ ချစ်ရတာကိုပဲ နှစ်သက်သူပါ။ ပုံ (၂) ကို ရွေးခဲ့ရင် သင်ဟာ သင့်ရဲ့ခံစားချက်တွေကို လူသိရှင်ကြားထုတ်ပြတတ်ပါတယ်။ သင့်ခံစားချက်ကို ဘယ်သူ့ကိုမဆို ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ထုတ်ပြတတ်သူပါ။ သင်သိထားရမှာက သင့်ချစ်သူဘယ်သူဘယ်ဝါ၊ သင်တို့ပြဿနာ အဝဝကို … Read more
မျက်လုံးအိမ်ကျယ်တဲ့ မိန်းကလေးတွေရဲ့ ချစ်စဖွယ် အားသာချက်(၅)မျိုး
Unicodeဖြင့်ဖတ်ရန် မျက်လုံးအိမ်ကျယ်တဲ့ မိန်းကလေးတွေရဲ့ ချစ်စဖွယ် အားသာချက်(၅)မျိုး လူတစ်ယောက်ရဲ့ ရုပ်ရည်နဲ့သွင်ပြင် လက္ခဏာတွေကို ကြည့်ပြီး သူဟာ ဘယ်လိုလူမျိုးဖြစ်မလဲဆိုတာကို အကြမ်းဖျင်းခန့်မှန်းလို့ရပါတယ်။ မျက်လုံးအိမ်ကျယ်တဲ့မိန်းကလေးတွေရဲ့ စိတ်နေစိတ်ထားနဲ့အားသာချက်လေးတွေကတော့ ဒီလိုရှိပါတယ်။ (၁) ချစ်ဖို့ကောင်းတယ် အခုမှတွေ့တဲ့လူအသစ်တွေနဲ့လည်း အဆင်ပြေပြေ ပေါင်းသင်းတတ်သလို သူငယ်ချင်းတွေကြားမှာလည်း လူချစ်လူခင်များတဲ့သူတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ (၂) စပ်စုတယ် အရာရာကို သိလိုစိတ်ပြင်းပြပြီး စပ်စပ်စုစု ရှိတာကြောင့် အကြောင်းအရာတော်တော်များများကို သူတို့မသိတာမရှိသလောက်ပါပဲ။ တစ်ခုရှိတာက သူတို့တွေက စပ်စုပေမယ့် သူများကိစ္စတွေကိုတော့ ဝင်မစွက်ဖက်တတ်ပါဘူး။ (၃) လိုက်လျောညီထွေမှုရှိတယ် အခြေအနေတစ်ခုအပြောင်းအလဲဖြစ်သွားတဲ့အခါမျိုးမှာ အဲ့ဒီအပြောင်းအလဲကိုလက်ခံပြီး အဆင်ပြေအောင် လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်နေတတ်တဲ့သူလေးတွေပါ။ (၄) ဇွဲကောင်းတယ် ကိုယ်ဖြစ်ချင်တဲ့အရာတစ်ခု၊ လိုချင်တဲ့အရာတစ်ခုကို မဖြစ်မနေရအောင်ယူတတ်တဲ့ ဇွဲကောင်းတဲ့သူတွေကိုပြပါဆိုရင်လည်း သူတို့လေးတွေကိုပြရမှာပါပဲ။ (၅) သစ္စာရှိတယ် သူတို့တွေဟာ ချစ်မိပြီဆိုရင် မပြောင်းလဲတတ်တဲ့သဘောရှိပြီးတော့ သူတို့ဘက်ကဘယ်တော့မှသစ္စာမဖောက်တတ်တဲ့ သစ္စာရှိပြီး … Read more